Salaadda xasilloonida buuxda. ? Degganaanshaha iyo Khamriga
Tukashada Salaanta Waxaa loogu talagalay Reinhold Niebuhr oo ahaa filasoof Mareykan ah, fiqiga, iyo qoraa.
Ducadan oo noqotay mid aad u caan ah oo kaliya weedhaheeda koowaad, waxay asal ahaan ka soo qaadatay Dagaalkii Labaad ee Aduunka inkasta oo sheekooyinka ku duugan ducadan ay xoogaa kala duwanaan karaan, runtu waxay tahay, sida salaadda kasta, waa mid awood badan oo caawinaysa qof walba. Kuwa ku tukada tukashada iyagoo rumeysan inaynu weydiisanno waa la siin doonaa.
Wax kasta oo sheekada dhabta ah ee calaamad u ah bilowga ereyadan salaadda, waxaan aaminsanahay in ilaa maanta ay faa'iido weyn u tahay dhammaan kuwa rumeysan oo ku andacoonaya caqiidada katooliga.
Hubka ruuxiga ah ayaa nala siiyay si aan ugu haboonaano mana ahan inaan ka fikirno laakiin inaan falno, tukano oo rumeysanno inuu Ilaahay sameeyo inta kale.
1 Salaada xasiloonida Waa maxay ujeedadu?
1.1 Salaadda xasilloonida oo buuxda
1.2 Salaada xasilloonida San Francisco de Asís
1.3 Salaadda xasiloonida iyo deganaanshaha
1.4 Salaada Sujuudda Aalkolada La'aan
Salaada xasiloonida Waa maxay ujeedadu?
Deganaanshuhu waa xaalad deggan oo xasiloon oo ka fog xasillooni darrida muuqata iyo tan sare.
Ma dhihi karno waxaan xasilloon nahay marka gudaha aan ku rajo weynahay inaan aragno isbedelada aan u maleyno inay dhab yihiin.
Taasi maahan xasillooni dhab ah laakiin waa xaalad munaafaqnimo oo marar badan aan ku dhicin khalad annaga oo isku dayaya inaan kirayno waxa aan haysan.
Xaalad nabadgelyo buuxda oo aamin ah ilaah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan sii wadno aaminaadiisa inkasta oo aan aragno waxa aan aragno. Degganaanta Eebbe waxay noo horseedaysaa inaan rumeyno.
Ma jirto hab lagu xasiliyo marka aannaan aaminsanahay Ilaah, xasilloonida buuxda iyo aaminaadda dhabta ahi waxay ka timaadaa gacanta qof ina yaqaan, bilow ilaa iyo mustaqbalkeenna.
Salaadda xasilloonida oo buuxda
Ilaahow, i sii xasillooni si aan u aqbalo waxyaabaha aanan beddeli karin, geesinimada aan ku beddelo waxyaalaha aan beddeli karo iyo xikmadda si aad u ogaato farqiga; ku noolaanshaha hal maalin markiiba, adoo ku raaxaysan hal daqiiqad mar; u oggolaashada dhibaatooyinka inay yihiin dariiqa nabadda; Weydiista, sidii Eebbe ku sameeyay, dunidan dembiga ah sida ay tahay, oo aan ahayn sidii aan jeclaan lahaa; Waxaan aaminsanahay inaad wax walba si hagaagsan u bogsan doonto haddii aan isu dhiibo doonistaada; si aan ugu macquulsan ugu faraxsanaado noloshaan oo aan aad ula yaabay mustaqbalka dambe.
Ka faa'iidayso xoogga ducada xasilloonida buuxda.
Daacadnimada wakhtiyadan halka damacga nolol maalmeedka uu umagacaabay ayaa ah mudnaan ay tahay inaan la dagaallanno si aan u ilaalinno.
Waxaa naloo soo bandhigi karaa xaalado aan annagu doonaya in ay xadaan nabadda, qalbiga khalkhal geliya, xaaladahaas waxaa jiro duco gaar ah oo xasilloonidarro buuxda.
Waa muhiim inaan ogaano inuusan Eebbe wax badh ah sameynin oo laga yaabo inay hadda tahay ma aragno mucjisadii oo la dhammeeyey isla waa inaan sii wadnaa aaminaadda Eebbe inuu ogyahay sida ay tahay iyo xilligaas uu u dhaqaajin doono qaybo ka mid ah anaga.
Salaada xasilloonida San Francisco de Asís
Sayidow, ii samee qalab nabdoon, Oo meesha nacaybku ku jiro, jacayl baan dhigayaa, meesha xadgudubku jiro, waan cafiyaa, markay muran jirto, oo waxaan ururiyaa meesha qaladka lagu xukumo, oo runtaan runtaa, oo meeshii aan shaki ku jirinna waan saaraa Rumaysad, meesha rajo la'aato, rajo baan rajo ku qabaa, meesha gudcurkaaguna ku jiro, oo aan iftiimiyo, halkaasoo murug ahu jiro, farxad baan gelin doonaa.
Sayidow, ha u doonaynin inaan aad u qalbi qaboojiyo sida la ii qalbi qaboojiyo, oo la ii garto sida wax wax loo fahmo, iyo in la ii jeclaado sida lagu jeclaado.
Sababtoo ah wax bixinta waa la helaa, wax la iska ilaawo ayaa la helaa, is cafiya waa la cafiyey, dhimashaduna waxay gaadhay nolosha weligeed ah.
Saint Francis of Assisi waa mid ka mid ah quduusiinta oo kaniisadda katooliga ay aad u jeceshahay tan iyo markii ay ahayd qalabkii Ilaahay ee barakeeyey nolosha iyo qoysas badan.
Waxaa lagu yaqaanaa inuu khabiir yahay Xaaladaha adag, kuwa u muuqda kuwa luminaya nabadeena. Socodkiisii ​​halkan dhulka wuu u hogaansanaayay, had iyo jeer qalbi qabow soo dejiyey oo codkisa codka Ilaah ka fiirsada.
Waxaa laga codsaday, waxyaabo kale, inuu naga buuxiyo xasillooni, inuu na siiyo awood aan ku aragno xaqiiqda oo aan ku sii wadno aaminaadda, inaan sii wadno rumaynta mucjisooyinka.
Inaan ku sii noolaado xasilloonida iyo xasilloonida maxaa yeelay waxaa jira qof awood badan oo daryeela aniga iyo qoyskayga iyo asxaabteyda wakhti kasta.
Taasi waa inay noqotaa tukashadeena, tukashadeena maalinlaha ah iyo dhibkasta oo xun waxay u egtahay, aan ka ilaalino qalbi daganaansho salka hoose oo aan aaminsanahay inuu Ilaahay ina caawiyo markasta.
Salaadda xasiloonida iyo deganaanshaha
Samada jannada ah, Eebbe jecel oo naxariis leh, Aabbahayaga wanaagsan, naxariistaadu waa mid aan xadidnayn, Sayidow adigaan kula joogaa wax kasta oo aan u baahanahay, adiga oo dhinacayga ah waan ku xoog badanahay, waxaana dareemayaa in la igu raacsan yahay, sidaa darteed waxaan kaa baryayaa inaad adigu lahaato Guriga, noloshayada iyo qalbiyadeena, wuxuu degaa oo xukumaa Aabaha Quduuska ah ee dhexdeena ah iyo xasilloonida dareenkeena iyo nafteenna.
Aniga ……. Aniga oo leh kalsooni buuxda adiga iyo daacadnimada ilmaha jecel Aabihiis, waxaan kaa baryayaa inaad fadligaaga iyo barakadaada noo ballaariso, daadadkeena ahaato deganaan iyo degganaan, ilaasho riyooyinkeena, nalasosocod habeenimo, fiiri talaabooyinkayaga , na toos inta maalinta lagu jiro, na sii caafimaad, xasillooni, jacayl, midow, farxad, na baro sida loo noqdo aamin iyo saaxiibtinimo midba midka kale, in aan ku sii nagaano kalgacayl iyo raalli ahaansho iyo in aan gurigan ku haysanno nabad iyo farxad aan u xiisaynayno.
U oggolow Maryantii Barakeysan ee Maryan ahayd, Hooyada wiilkaaga barakaysan iyo Hooyadayada jacaylka badan, inay nagu duubto dharkeeda Ilaalinta ee Quduuska ah oo ay ina caawiso marka khilaafaadka ay kala baxaan oo ay naxdin geliyaan, u oggolow gacanteeda macaan iyo jilicsanaanta in ay naga fogeyso. Wadahadalka iyo iskahorimaadyada, ha nala sii joogo iyada oo ay tahay magangalkeenna inta ay dhibaataysan tahay.
Sayidow gurigan u soo dir Malag Nabadda, si uu noogu keeno farxad iyo wada noolaansho si uu u gudbiyo Nabadda oo keliya Adigu waad taqaanid sida aad na siiso oo aad nooga caawiso culayska iyo hubannadayada, sidaa darteed, duufaanta dhexdeeda iyo Dhibaatooyinka, waxaan kuheli karnaa faham qalbiga iyo fikirka ah.
Sayidow, na fiiri si raaxo leh oo noogu deeqo Nicmadaada iyo Barakadaada, noo soo dir Caawintaada xilliyadaan masiibada ah oo dhibaatooyinka iyo khilaafaadka aan soo marayno ku hello xal deg deg ah oo wanaagsan, gaar ahaan waxaan kaa codsanayaa deeqsinimadaada aan dhammaadka lahayn:
(weydiiso is-hoosaysiin iyo kalsooni wixii aad rabto inaad hesho)
Waligaa ha naga tagin sababtoo ah waxaan ubaahan nahay Adiga, in jacaylkaaga waxtarka leh, cadaaladdaada iyo xooggaaga ay inala soo socdaan oo daqiiqad kasta xasilloonaan na siiso; May jiritaankaaga noolaanshaha ha noo hanuuniyo oo na tusi jidka ugu wanaagsan, wada noolaanshahaagu ha nooga beddelo xagga gudaha oo naga dhigo kuwa aad u wanwanaagsan, naga caawi Sayidow, in daqiiqad kasta oo nolosheena, jacayl iyo iimaan leh ay xoog badan yihiin oo weynaadaan oo Na sii waxa ay ku qaadaneyso sidaa darteed habeen walba markii aan seexanno waxaan ogaanaa sida aan kuugu mahadcelino waxkasta oo aad na siiso.
Iska cafi qaladaadkeena oo noo oggolow inaan ku sii noolaano nabad quduus ah, ha noqoto jacaylkaaga jacaylkaagu ha ilaaliyo, ha laga yaabo in rajooyinka aan kugu rumeynno ay noqdaan wax aan waxtar lahayn oo aaminaaddayadu weligeed adiga kugu jirto.
Mahadsanid Aabaha Jannada.
U soo ducee salaadda xasilloonida iyo xasilloonida iimaanka.
Ilaah had iyo jeer waa xannaaneeyaa, taas waa sababta aan u aaminsanahay inuu ku qabanayo doonistiisa nolosheena mar walba.
Waa inaan ka walwalaanaa had iyo jeer maskaxdeena ku heysata fikirka nabada, fikirka dhaliya xasilloonida iyo kalsoonida.
Maskaxdu waa goob dagaal oo aan badanaa ku dhici karno xitaa haddii aan isku dayno inaan muuqanno haddii kale. Maaha tixgalinta xaalada waxna kama qabanayaan maxaa yeelay waan aaminsanahay.
Waxay u dhaqmeysaa si buuxda oo kalsooni leh, kalsooni iyo xasilloonaan inkasta oo ay indhahaygu wax kale arkaan Waxaan ogahay in Ilaaha ah Aabaha Abuuraha abuuraya wax aniga ila wanaagsan mar kasta sababtoo ah wuu i jecel yahay.
Salaada Sujuudda Aalkolada La'aan
01 Laga bilaabo choirmaster. Qaabka Iedutún. Sabuurradii Daa'uud.
02 Naftaydu waxay sugtaa Ilaah oo keliya, Maxaa yeelay, badbaadintu isagay ka timaadaa.
03 Isaga oo qudha ayaa dhagaxayga weyn iyo badbaadadaydaba ​​ah, Isagu waa munaaraddayda, oo aniga la dhisi maayo.
04 Ilaa goormaad nin ku riixaysaa inaad isku jejebisaan oo aad u dumisid sida derbi dhacaya?
05 Waxay ka fikiraan oo iga ruxeeyaan dhererkayga, Oo waxay ku farxaan beensheegidda, Afka way ka duceeyaan, Oo qalbigooda ayay habaaraan.
06 Naftaydoy, Ilaah oo qudha isku ahow, Maxaa yeelay, isagu waa rajo weyn,
07 Isaga oo qudha ayaa dhagaxayga weyn iyo badbaadadaydaba ​​ah, Isagu waa munaaraddayda, oo aniga la dhisi maayo.
08 Badbaadadayda iyo ammaantayduba waxay ka timaadaan xagga Ilaah, Isagu waa dhagaxayga gabbaadka ah, oo Ilaahna waa magangalkayga.
09 Dadkiisa ahu, isaga isku hallee, Qalbigiisuna ha ka hor naqo, Inuu Ilaah magangalkeenna yahay.
10 Nimanku waa wax aan dabayl lahayn, Oo ragga gobta ahuna waa muuqashooyin, dhammaantood way soo wada baxaan, oo dabayshu way ka sii xoog yaraataa.
Ha aaminin dulmiga, been abuurka ha ku tuugin, Xataa haddii hodantinimadaadu badato, qalbiga ha siin.
12 Ilaah wuxuu yidhi wax keliya, iyo laba waxyaalood oo anigu aan maqlay: «In Ilaah leeyahay xoogga
13 Oo Rabbiguna nimco buu leeyahay; in midkiin kasta sidii shuqulkiisu ahaa u bixiyo.
Kalsoonida ayaa la barbar dhigaa Awoodda xasilloonida dhexe ee duufaanta, rumaynta iyo ogaanshaha in Ilaah ina xannaaneeyo.
Waqtiyada rajo beelka waxaa muhiim ah inaan maskaxda ku hayno tukashadan oo aan ku dhaqan galin karno waqti kasta.
Uma baahna meel gaar ah ama jawi si loo tukado iyo in yar marka aynu leenahay nafta ama qalbiga oo ku daalay degenaansho la’aanta.
Falalkaas aan u maleyneyno inaan waayi doonno xakamaynta, ducadu waxay wax ka beddeli kartaa taariikhda taariikh ahaan annaga noo wanaagsan, waa inaad rumeysan tahay.
Waligaa ha ilaawin inaad rumaysad yeelato.
Rumayso Ilaah iyo xooggiisa oo dhan.
Rumeeyso ciidanka salaada ilaa deganaanta dhameystiran. Kaliya markaa wuu ka adkaan doonaa waqtiyada xun.